KBC Singapore – Htuatira Nawku Hpung Htuatira Nawku Hpung – KBC Singapore Htuatira Nawku Hpung – KBC Singapore
Home / Sermon / Htuatira Nawku Hpung
Htuatira Nawku Hpung
Sermon From - Saranum Lasi Hkawn Awng Bible Passage - Shingran 2:18-29
18 Bai, Htuatira mare na Hpungakasa hpe ning ngu ka dat u: Wan shinglet zawn tu ala ai myi hte, magri jet zawn san ai lagaw tu ai Karai KasangaKasha gaw, ning nga nga ai: 19 Naaarawn alai, tsaw ra ai myit, makam masham, amu gun hpai ai hte shakut sharang ai hpe mung, naahpang jahtum na amu bungli gaw shawng na hta grau law nga ai hpe mung, ngai chye nga nngai.
20 Rai ti mung, tinang dai myihtoi num nga ai, dai numsha Yezebela gaw, nang hta naw nga lu ai majaw, nang hpe mara shagun shara ngai mu nngai: shi gaw nyeashangun ma ni hpe, hpye ai amu galaw na hte sumla ni hpe nawng ya ai hkungga sha na lam sharin ya nna, shanhte hpe shut shangun mu ai.
21 Ngai shi hpe myit malai lu na aten jaw da rai ti mung, shiahpye ai amualam hta na myit malai n lu hkraw nga ai.
22 Yu u, ngai shi hpe yup ra hta kabai tawn na we ai; shi hte rau num shaw la shaw ai amu galaw ai ni hpe mung, shiaarawn alai hta na myit n malai ma yang gaw, tsin-yam tsindam kaba hta, ngai kabai tawn na ma we ai.23 Shiakashu kasha ni hpe si lam hte ngai sat kau na we ai: shaloi, nhkyun hte kraw lawang hpe sawk yu ai wa ngai rai nga nngai gaw, Hpung ni yawng chye lu na ma ra ai: nanhte hta na langai hte langai hte hpe, tinang niaamu hte maren ngai htang jaw na ma de ai.
24 Dai hta kaga, masha ni shamying dam ai, Satanasung htum ai lam hpe n chye n chyap ma ai hte, dai sharin shaga ai lam hpe n hkan nang ai, Htuatira mare hta naw ngam nga ai ni nanhte hpe ngai tsun ma de ai gaw, Ngai nanhte hta lit kaga naw n shajat na ni ai: 25 rai ti mung, nanhte lu ai made gaw, ngai du ai du hkraamanat nga mu.
26 Dang lu ai wa hte, prat htum hkra nyeaarawn alai hkan nang ai wa hpe, masha mungdan niantsaeup ai ahkang ngai jaw na we ai: 27 shi gaw shanhte hpe hpri sumdoi hte up nna, di bu samaadi bu ni hpe zawnagrawp kau ai, shanhte hkrum na ma ra ai: ning re ai ahkang nye Wa kaw na ngai lu la ai rai nna, 28 dai ninghtoi gintawng ngai shi hpe jaw na we ai. 29 Wenyi gaw Hpung ni hpe kaning nga tsun ai gaw, na tu ai wa gaw na lu u ga.
ဗှာဒိတကှမှှး အခနှးကှီး ၂:၁၈-၂၉
၁၈ သွာတိရမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏ တမန်ကိုဤသို့ရေး၍ မှာလိုက်လော့။ မီးလျှံကဲ့သို့သော မျက်စိနှင့်၎င်း၊ ကြေးဝါစစ်နှင့်တူသောခြေနှင့်၎င်း၊ ပြည့်စုံသော ဘုရားသခင့်သားတော်၏ အမိန့်တော်ကား၊
၁၉ သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ အမှုဆောင်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်းကို၎င်း နောက်ကျင့်သော အကျင့်တို့သည် အရင်ကျင့်သော အကျင့်ထက်သာ၍ များကြောင့်ကို၎င်း ငါသိ၏။
၂၀ သို့သော်လည်း၊ ငါ၏အစေခံကျွန်တို့သည် မတရားသော မေထုန်ကိုပြုစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ရုပ်တုရှေ့မှာ ပူဇော်သောယဇ်ကောင်ကို စားစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ပရောဖက်မဟူ၍ ကိုယ်ကိုခေါ်ဝေါ် သောသင်၏ခင်ပွန်းယေဇဗေလသည် သွန်သင်၍ မှားယွင်းစေရသောအခွင့်ကို သင်သည် ပေးသောကြောင့်၊ သင်၌အပြစ်တင်စရာရှိ၏။
၂၁ နောင်တရသင့်သော ကာလကို ငါပေးသော်လည်း၊ သူသည်မိမိမတရားသော မေထုန်ကို နောင်တရချင်သောစိတ်မရှိ။
၂၂ ထိုကြောင့်၊ သူ့ကိုအိပ်ရာ၌ ငါချထားမည်။ သူနှင့် အတူမတရားသောမေထုန်ကိုပြု၍၊ ထိုသို့သော အကျင့်ကိုနောင်တ မရသော သူတို့ကိုလည်း၊ ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်စေမည်။
၂၃ သူ၏သား သမီးတို့ကိုလည်း အသေသတ်မည်။ ငါသည်နှလုံးကျောက်ကပ်ကို စစ်ဆေးတော်မူသောသူဖြစ်ကြောင်းကို၊ ထိုသို့သောအားဖြင့် ခပ်သိမ်းသော အသင်းတော်တို့သည် သိရကြလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် အသီးအသီးကျင့်သော အကျင့်နှင့် အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုငါပေးမည်။
၂၄ ထိုမိစ္ဆာဒိဌိအယူကို ယူသောသူတို့ခေါ်ဝေါ်သည်နှင့် အညီ၊ စာတန်၏ နက်နဲသောအရာဟု ခေါ်ဝေါ်သော အရာတို့ကိုမကျွမ်း၊ ထိုမိစ္ဆာဒိဌိအယူကိုမယူ၊ ကြွင်းသောသွာတိရမြို့သားတို့ကိုငါဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် ရသမျှကို ငါလာသည်တိုင်အောင်စွဲကိုင်ကြလော့။
၂၅ ထိုမှတပါးအခြားသောဝန်ကို သင်တို့ အပေါ်၌ ငါမတင်။
၂၆ အကြင်သူသည် အောင်မြင်၍ အဆုံးတိုင်အောင် ငါ့အကျင့်ကိုကျင့်၏၊ ငါ့ခမည်းတော် သည် ငါ့အားအခွင့်ပေးတော်မူသကဲ့သို့၊ လူမျိုးတို့ကို အုပ်စိုးစေခြင်းငှါ ထိုသူအားငါသည်အခွင့်ပေးမည်။
၂၇ ထိုသူသည် သူတို့ကိုသံလှံတံနှင့် အုပ်စိုး၍၊ မြေအိုးကိုခွဲဖျက်သကဲ့သို့ ခွဲဖျက်လိမ့်မည်။
၂၈ မိုဃ်းသောက်ကြယ် ကိုလည်း ထိုသူအားငါပေးမည်။
၂၉ ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကို နားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေ။
Hpring Tsup Ai Kabu Gara Shiga
Pyengdin Zawn Htoi Tu Nga Ai Chyum Mungga